नेप्सेमा उछाल, झण्डै १ सय अंकको वृद्धि « Jagaran News
Published On : 18 July, 2021 3:41 pm
काठमाडौँ , साउन ३ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहँदा बजारमा ठूलो अंकको वृद्धि देखिएको छ।
नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो कारोबार दिन सेयर बजारमा उछाल आएको छ । सो दिन बजार खुल्दादेखि नै बढ्न थालेको नेप्से कारोबार अवधिभर निरन्तर उकालो लागिरह्यो । नयाँ आर्थिक वर्षमा कारोबार भएको पहिलो दिन सेयर बजारको परिसूचक नेप्से झण्डै १ सय अंकले बढेको छ। ९७. २ अंकले बजार बढेर २९८० अंक कायम भएको छ।
यस दिन कारोबार रकममा पनि वृद्धि भएको छ। ११ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ। सबै समूहहरु बढेका छन्।जेठ ३१ गते परिसूचकले सबैभन्दा धेरै ३०२६ अंक कायम गरेको थियो। त्यस्तै जेठ ३० गते सबैभन्दा धेरै १९ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको रेकर्ड छ।
मल्टिपर्पोज फाइनान्सको १।७७ तथा रिडी हाइड्रोपावरको १।३९ प्रतिशतले मूल्य घटेको छ। अरुण भ्याली, नारायणी डेभलपमेन्ट र माथिल्लो तामाकोसीको मूल्य पनि घटेको छ।
आइतबारदेखि सेयर बजारमा नयाँ नियम लागू
काठमाडौं, साउन ३ । आइतबारदेखि सेयर बजारमा नयाँ नियम लागू भएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्ड
ग्लोबल आइएमई बैंकले ल्यायो ७. ९९ प्रतिशत ब्याजमा आवास कर्जा योजना
काठमाडौं, साउन ३ । ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेडले ७,९९ प्रतिशत (प्रिमियम सहित) आकर्षक ब्याज दरमा
ग्लोबल आइएमई बैंकले ल्यायो ७.९९ प्रतिशत ब्याज दरमा विशेष आवास कर्जा योजना
काठमाडौं, साउन १ । ग्लोबल आइएमई बैंकले ७.९९ प्रतिशत ९प्रिमियम सहित० आकर्षक ब्याज दरमा विशेष
माधव नेपाल बेग्लै कोर्षमा हिँड्न चाहेको प्रष्ट भयो : प्रदीप ज्ञवाली
काठमाडौं, साउन ३ । नेकपा एमालेका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल बेग्लै कोर्षमा
काठमाडौं, साउन ३ । संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश खारेज भएको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी